Nakhu ukufingqwa okuzokusiza ubone ukuthi ukubhukha kwakho kuyafaneleka yini.
Ukubhukha kwakho kuyafaneleka uma konke okulandelayo kuyiqiniso
Ubhukhe ngo-March 14, 2020 noma ngaphambi kwalokho
futhi usuku lokungena luphakathi kwezinsuku ezingu-45 ukusuka namuhla
futhi awukaze ukukhansele
futhi awukaze ungene
futhi ubhubhane lukuvimbela ukuba uphothule ukubhukha kwakho
Qaphela: Uma uphethwe yi-COVID-19, ungakhansela ngaphansi kwenqubomgomo kungakhathaliseki imininingwane yakho yokubhukha, ngokuthi uxhumane nethimba lethu elisiza umphakathi. Uzocelwa ukuthi uqinisekise lokhu ngamadokhumenti.
Ukubhukha kwakho akufaneleki uma ngabe ukhansela ngenxa ye-COVID-19 futhi uma noma yikuphi okulandelayo kuyiqiniso
Kubhukhwe ngemva kuka-March 14, 2020 noma
Usuku lokungena seludlule ngezinsuku ezingaphezu kuka-45 ukusuka namuhla noma
Besekuvele kukhanseliwe noma
Qaphela: Lapho ukubhukha kukhanselwa, i-Airbnb ikhipha noma yikuphi ukukhokhelwa okufanele kuye kumbungazi nanoma iyiphi imali ebuyiselwayo okufanele iye esivakashini ngokuvumelana nenqubomgomo yokukhansela yombungazi. Ngenxa yaleso sizathu, ukubhukha okukhanselwe ngaphambi kokumenyezelwa kwekhavareji noma ukwandiswa kwayo ngeke kucatshangelwe kabusha.
Izindlela ezengeziwe uma ukubhukha kwakho kungafaneleki
Uma izinhlelo zakho zishintshashintshana nezimo, ungahle ucabangele ukusebenza nombungazi wakho ukuze ushintshe ukubhukha kuye kolunye usuku.
Ungase futhi uthinte umbungazi wakho ukuze ucele imali ebuyiselwayo eyengeziwe, futhi uma evuma, angasebenzisa Isikhungo Sesixazululo ukudlulisela imali kuwe ngokuphephile.
Ngikushintsha kanjani ukubhukha kwendawo yokuhlala?
Thumela isicelo sokushintsha kumbungazi wakho ohambweni lwakho uma ungathanda ukushintsha ukubhukha kwakho.